DAAWO: Faysal Waraabe oo ka hadlay Saldhiga Imaaraadku Doonayo “Dalka Itoobiya ma leh, ee anagaa leh”! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO DAAWO: Faysal Waraabe oo ka hadlay Saldhiga Imaaraadku Doonayo “Dalka Itoobiya ma leh, ee anagaa leh”!
DAAWO: Faysal Waraabe oo ka hadlay Saldhiga Imaaraadku Doonayo “Dalka Itoobiya ma leh, ee anagaa leh”!
Jan 13, 2017MAQAALO, MUUQAAL
Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay Qorshaha Imaaraadku uu doonayo in Saldhig uga samaysto Magaalada Berbera, wuxuuna sheegay in cadhada Ethiopia aysan macno sameyn doonin dalkana aysan ayagu lahayn, qabyaaladana aysan sii socon doonin.
Faysal wuxuu sheegay inaan dhulka la kala sheegan karin wuxuuna ka digey inuu odayaasha dhaqanka ee qabyaalada ku shaqeeya xidh xidhi doono hadii la doorto, “Hadii la idoorto ma jiri doonto cid sheegata Dhul, Caaqil danbe iyo Nin danbe oo Qaad Cunay iima Hanjabi doono, Jeelka ayaan ku Gurayaa” Ayuu yidhi.
Previous PostKulan lagu soo afjarayo colaad oo maanta lagu qabanayo deegaanka Gadoon ee gobolka Galgaduud!! Next PostKooxda Xamaas oo la soo baxday xeelad cusub oo ay ku basaaseyso ciidamada Yuhuuda!!